Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State-owned first railway - RayHaber
HomeGeneralTaa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State nwere mbụ ụgbọ okporo ígwè
Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State nwere mbụ ụgbọ okporo ígwè
04 / 08 / 2019 Levent Elmastaş General, Turkey, Taa na akụkọ ihe mere eme 0
Haydarpasa izmit okporo ụzọ
4 August 1871 Construction nke Haydarpaşa-İzmit ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke mbụ, amalitela.
E mepere 4 August 1895 Çöğürler-Afyon (74 km). Nweta nke a zụrụ na 31 December 1928.
Ndị na-eyi ọha egwu na 4 August 1903 na-agbapụta ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè na dynamite. A na-ere ụlọ nkwakọba akụ na Banice Station ma gbanyụọ wired wired.
4 August 2019 Istanbul-Izmir Highway 4 mepere maka ọrụ site n'aka Onye isi ala Recep Tayyip ERDOĞAN na ememe na Bursa na Sọnde.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State-first owned line line Haydarpasa-Izmit ... 04 / 08 / 2012 4 August 1871 Construction nke Haydarpaşa-İzmit ụgbọ okporo ígwè, ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke mbụ, amalitela. E mepere 4 August 1895 Çöğürler-Afyon (74 km). A zụtara akara na 31 December 1928. Ndị na-eyi ọha egwu na 4 August 1903 na-agbapụta ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè na dynamite. A na-ere ụlọ nkwakọba akụ na Banice Station ma gbanyụọ wired wired.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State-owned first rail line line ... 04 / 08 / 2015 Taa na History 4 August 1871 State nwere mbụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè Haydarpaşa-İzmit ụgbọ okporo ígwè malitere. E mepere 4 August 1895 Çöğürler-Afyon (74 km). A zụtara akara na 31 December 1928. Ndị na-eyi ọha egwu na 4 August 1903 na-agbapụta ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè na dynamite. A na-ere ụlọ nkwakọba akụ na Banice Station ma gbanyụọ wired wired.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State-owned first rail line line ... 04 / 08 / 2016 Taa na History 4 August 1871 State nwere mbụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè Haydarpaşa-İzmit ụgbọ okporo ígwè malitere. E mepere 4 August 1895 Çöğürler-Afyon (74 km). A zụtara akara na 31 December 1928. Ndị na-eyi ọha egwu na 4 August 1903 na-agbapụta ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè na dynamite. A na-ere ụlọ nkwakọba akụ na Banice Station ma gbanyụọ wired wired.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State nwere mbụ ụgbọ okporo ígwè 04 / 08 / 2018 Taa na History 4 August 1871 State nwere mbụ ụzọ ụgbọ okporo ígwè Haydarpaşa-İzmit ụgbọ okporo ígwè malitere. E mepere 4 August 1895 Çöğürler-Afyon (74 km). A zụtara akara na 31 December 1928. Ndị na-eyi ọha egwu na 4 August 1903 na-agbapụta ụfọdụ ụgbọ okporo ígwè na dynamite. A na-ere ụlọ nkwakọba akụ na Banice Station ma gbanyụọ wired wired.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 Disemba 1871 okporo ụzọ okporo ụzọ site na Edirne na ebe gbara ya gburugburu ebibila. 09 / 12 / 2012 Taa na History 9 December 1871 E jirila mmiri ozuzo kpoo okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Edirne na ebe gbara ya gburugburu.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 7 March 1871 Sultan Abdulaziz ga-ebipụta ụgbọ okporo ígwè nke Asia 07 / 03 / 2015 Taa na History 7 March 1871 Sultan Abdulaziz bipụtara uche ya ma kwupụta echiche nke ijikọta mpaghara Eshia na netwọk okporo ígwè. Uzo dị n'etiti Istanbul na Baghdad. Ọ ga-ejikọta Oké Osimiri Ojii, Mediterranean na Gulf Persia n'akụkụ n'akụkụ.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 December 1871 Railways lines destroyed by heavy rain in Edirne na ebe gbara ya gburugburu 09 / 11 / 2013 Taa na History 9 December 1871 E jirila mmiri ozuzo kpoo okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Edirne na ebe gbara ya gburugburu.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 Disemba 1871 okporo ụzọ okporo ụzọ site na Edirne na ebe gbara ya gburugburu ebibila. 09 / 12 / 2014 Taa na History 9 December 1871 E jirila mmiri ozuzo kpoo okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Edirne na ebe gbara ya gburugburu.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 7 March 1871 Sultan Abdulaziz bipụtara ọchịchọ ya ma kwupụta echiche nke ijikọta ókèala Eshia na netwọk okporo ígwè. 07 / 03 / 2012 7 March 1871 Sultan Abdulaziz bipụtara uche ya ma kwupụta echiche nke ijikọta ókèala Eshia na netwọk okporo ígwè. Uzo dị n'etiti Istanbul na Baghdad. Ọ ga-ejikọta Oké Osimiri Ojii, Mediterranean na Gulf Persia n'akụkụ n'akụkụ.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 17 November 1871 Baron Hirsch nyere 1 nde francs na òtù ndị Juu ụwa. 17 / 11 / 2012 Taa na History 17 November 1871 Baron Hirsch nyere 1 nde francs na òtù ndị Juu ụwa.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State-first owned line line Haydarpasa-Izmit ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 4 August 1871 State-owned first rail line line ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 Disemba 1871 okporo ụzọ okporo ụzọ site na Edirne na ebe gbara ya gburugburu ebibila.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 7 March 1871 Sultan Abdulaziz ga-ebipụta ụgbọ okporo ígwè nke Asia
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 December 1871 Railways lines destroyed by heavy rain in Edirne na ebe gbara ya gburugburu
Taa na akụkọ ihe mere eme: 7 March 1871 Sultan Abdulaziz bipụtara ọchịchọ ya ma kwupụta echiche nke ijikọta ókèala Eshia na netwọk okporo ígwè.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 17 November 1871 Baron Hirsch nyere 1 nde francs na òtù ndị Juu ụwa.